Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Mampifandanja ny olona, ​​ny planeta ary ny tombom-barotra amin'ny toekarena fizahan-tany mety
Delegasiona manatrika ny fihaonambe ho avy eo amin'ny Beachcombers Hotel ao St. Vincent sy ny Grenadines dia handinika ny fomba hahitana fifandanjana mitovy eo amin'ny filan'ny fiarahamonina, ny tontolo iainana ary ny toekarena.
Ny drafitra fampandrosoana ara-toekarena any Karaiba dia tokony hanaja ny fifandraisana sarotra eo amin'ny tontolo iainana, ny filàna ara-tsosialy ary ny tombom-barotra, hoy ny Caribbean Tourism Organization (CTO).
Amin'io toe-javatra io no hametrahana ny filàna fandanjalanjana ny olona, ​​ny planeta ary ny tombom-barotra ho an'ny toekarena fizahan-tany mety ho adihevitra lehibe amin'ny fihaonambe Karaiba momba ny fampandrosoana maharitra momba ny fizahan-tany any St.Vincent sy Grenadines.
Nandritra ny fotoam-pivoriana ankapobeny mitondra ny lohateny hoe "Ny fiompiana miahy ny olona: ny olona, ​​ny planeta ary ny tombom-barotra," voalahatra ny zoma 29 aogositra amin'ny 9 ora maraina, ireo mpandray anjara dia haseho ireo ohatra fanao faran'izay azo tsapain-tànana amin'ny fandanjana ara-drariny eo amin'ireo faharetana telo nampiharina eo amin'ny sehatra eo an-toerana, isam-paritra ary iraisam-pirenena. Ireo mpanolotra dia hampiseho ny fomba ahafahan'ny mpandrafitra fampandrosoana manangana toekarena miahy izay mahafaoka ny tsangambato maharitra rehetra.
Ny iray amin'ireo ohatra hasongadina dia ny programa People-to-People any Bahamas izay ampiarahan'ny mpitsidika miaraka amin'ireo mpampiantrano ao an-toerana izay mizara ny kolontsaina sy ny sakafo ary ny tantara Bahamiana, ary ny fananana finamanana maharitra.
Ny fihaonambe, fantatra amin'ny anarana hoe Sustainable Tourism Conference (# STC2019), dia natokana ny 26-29 Aogositra 2019 ao amin'ny Hotely Beachcombers any St.Vincent ary karakarain'ny CTO miaraka amin'ny St. Vincent sy ny Grenadines Tourism Authority ( SVGTA).
Eo ambanin'ny lohahevitra "Mitandrina ny mizana marina: fampiroboroboana ny fizahan-tany amin'ny vanim-potoanan'ny fahasamihafana", ireo manampahaizana manokana amin'ny indostria mandray anjara amin'ny # STC2019 dia hiresaka ny filana maika ny vokatra fizahan-tany mampiovaova, manakorontana, ary mamerina amin'ny laoniny hiatrehana ireo fanamby tsy mitsaha-mitombo. The fandaharana fihaonambe feno dia azo zahana eto.
St.Vincent sy ny Grenadines dia hampiantrano ny STC ao anatin'ny fanentanana nasionaly manakaiky ny toerana maitso sy maharitra kokoa, ao anatin'izany ny fananganana toha-pivoarana hafanana any St.Vincent mba hamenoana ny herin'ny hidrôtra sy ny angovo avy amin'ny masoandro ary ny famerenana amin'ny laoniny ny Ashton. Lagoon any Union Island.
Fitsidihana an'i Kauai Avaratra Shore: Angamba tsy avy nahalala fitsipika vaovao